Buy Training Clicker for Dog (7,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Training Clicker for Dog
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 243ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 49 (+1)
ခွေး လေ့ကျင့်ဖို. ကလစ်
Training Clicker for dogs
ခွေး လေ့ကျင့်ဖို. ကလစ် ကလေးများကို Rocket တွင် ဝယ်လို.ရပါပြီ။
ကလစ် တစ်ချက်ဆို မုန်.ကျွေးရန်
ကလစ် နှစ်ချက်ဆို ကစားရန်
ကလစ် သုံးချက်ဆို စိတ်ဆိုးတာကို ပြရန်
ကလစ် လေးချက်ဆို ရိုက်ရန်
စသဖြင့် လိုသလို လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
တခြား သင်ခန်းစာများ လေ့လာရန်
အခုပင် မကုန်ခင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
တစ်ခု – 7,000 kyats
သုံးခု – 20,000 kyats
Delivery free in Yangon (ရန်ကုန်မြို.တွင်း ၆မြို.နယ်သာ)
နည်းနည်းဝေးသော မြို.များ – ၄ထောင်ကျပ်
ဥပမာ – တောင်ကြီး၊
နယ်စွန်နယ်ဖျား – ၅ထောင်ကျပ်
ဥပမာ – ကော့သောင်း၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ မြဝတီ
အမှတ် ၁၃၂၊ ၄လွှာ B၊ ဗဟိုလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို.နယ်၊ ရန်ကုန်
အလှမွေးငှက် လှောင်အိမ် နှင့် ပစ္စ...
အမည်: Training Clicker for Dog